ETA tiknoolajiyad sare oo cusub ayaa la soo bandhigay si loo nadiifiyo Socdaalka Australia
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Technology » ETA tiknoolajiyad sare oo cusub ayaa la soo bandhigay si loo nadiifiyo Socdaalka Australia
Airport • Wararka Australia • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • News • Dib-u-dhiska • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka
ETA tiknoolajiyad sare oo cusub
Australia hadda waxay u xidhan tahay badi booqdayaasha ajaanibka ah, laakiin marka dib-u-furiddu dhacdo barnaamij cusub si loo fududeeyo ka-hortagga booqdayaasha waddanka loo yaqaan Down Under waxay ku tiirsanaan kartaa APP cusub si loo fududeeyo tallaabadan loo baahan yahay si loo soo galo waddanka.
Barnaamijka ETA ee Australiya waa natiijada wada-shaqaynta wada-shaqaynta ee ku lug leh khubaro ka socota Waaxda Arrimaha Gudaha ee Australia, SITA, iyo Kooxda Arq.
Naqshadeynta iyo hormarinta Sydney, barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa jinsiyadaha u qalma inay si ammaan ah uga codsadaan ETA, daqiiqado gudahood, aaladooda gacanta.
Iyada oo la adeegsanayo farsamooyin la xoojiyay si si otomaatig ah loogu buuxiyo xogta baasaaboorka codsadaha iyo qabashada bayoolojiga, habkan is-adeegsiga aadka u ammaansan ma aha oo kaliya inuu kordhiyo saxnaanta iyo hodanka xogta laakiin wuxuu si weyn u hagaajiyaa khibradda isticmaalaha.
SITA wuxuu hormood ka ahaa nidaamka ETA ee Ciyaarihii Olombikada 2000 ee Sydney si uu mas'uuliyiinta u siiyo aragti hore malaayiin qof oo soo booqda oo qorshaynaya inay ka gudbaan xuduudda iyo inay yareeyaan caqabadaha ka jira safaaradaha Australia iyo isbaarooyinka socdaalka. Tan iyo markii la soo bandhigay, ETA waxay istaagtay tijaabinta waqtiga waxayna horseeday waddada fiisooyinka elektiroonigga ah oo loo asaasay inay tahay kanaalka caadiga ah ee noocyada fiisaha fudud (tusaale, Visa imaanshaha) waaxaha socdaalka adduunka oo dhan.
Australia ayaa weli ah meel loo safro oo caan ah ETA APP waxay muujin doontaa waxtarkeeda kadib xiisadda COVID ee hadda jirta oo dalku dib u furmay socotada.
Kadib in ka badan 20 sano oo isbadal tiknoolajiyadeed oo baaxad leh, waxay ahayd waqtigii dib loo soo noolayn lahaa ETA iyada oo loo sii marayo barnaamijka ETA ee Australia. Teknolojiyad cusub iyo tusaalooyin cusub ayaa abuuraya filashooyinka bulshada ee is -beddelka helitaanka, waayo -aragnimada, iyo adeegga, gaar ahaan marka hal -abuurnimadu ay tahay matoorka xoojinaya isbeddelka.
Heerka daahfurka iyo cilmi -baarista ee mashruuca ayaa ku lug lahaa fahamka qofka iyo baahida socotada ee muhiimka ah. Waxay diiradda saartay helitaanka faham qoto dheer oo ku saabsan codsadaha, ganacsiga, iyo shuruudaha warshadaha safarka iyo filashooyinka si loo qeexo dhammaadka-ilaa dhammaadka safarka adeegsadaha-gobolka mustaqbalka.
Horumarinta xalka casriga ah iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad horumarsan, kooxdu waxay maanka ku haysay baahida loo qabo in la soo bandhigo badeecad dareen leh oo sugan iyadoo la bixinayo awoodaha adag ee la xiriira qabashada xogta, ansaxinta, tirada dadka, iyo tan ugu muhiimsan, xaqiijinta aqoonsiga. Waxaan qaadnay farsamo dhammaystiran, is-dhexgal, iyo tijaabinta isticmaale si aan u hubinno in xalka uu diyaar yahay iyo in ku-tiirsanaanta isticmaalehu ay ku sii jirto wadnaha naqshadda. Lakabka soo-saaridda ayaa soo koobay dhammaan teknolojiyadda dhinac saddexaad, sidaas darteedna ka dhigaysa app-ka mid mustaqbalka-caddayn kara oo aad ugu fudud farsamooyinka hadda jira in lagu beddelo kuwo cusub oo ka fiican mustaqbalka.
Nidaamka waxaa laga heli karaa aaladaha oo dhan. Si diirada loo saaro waayo -aragnimada isticmaalaha, appku wuxuu u baahan yahay inuu bixiyo hab ku habboon oo toos ah si loo helo fiisaha Australia dhammaan aaladaha ku jira aaladda iOS iyo Android labadaba.
Sidee ayuu u shaqeeyaa appku?
Barnaamijku wuxuu ka faa'iideysanayaa teknolojiyadda guur-guura (Aqoonsiga Dabeecadda Indhaha (OCR) iyo Isgaarsiinta Goobta u dhow (NFC)) si loo qabto oo loogu hor-geeyo baasaboorka muhiimka ah iyo macluumaadka aqoonsiga si toos ah baasaboorka. Si sax ah u qabashada xogta dalabka muhiimka ah si toos ah ilaha lagu kalsoon yahay waxay meesha ka saareysaa khaladaadka gelitaanka xogta iyo is -waafajinta saameeya howsha fiisaha.
Barnaamijku wuxuu xaqiijinayaa oo ku ansaxinayaa baasaboorada elektiroonigga ah iyada oo loo marayo kartida NFC ee taleefanka casriga ah halka laga codsanayo halkii laga dhigi lahaa xuduudaha jirka. Helitaanka chip -ka baasaboorka waxaa lagu helaa iyada oo la adeegsanayo OCR si loo akhriyo Aagga Mashiinka La Akhrin Karo (MRZ) ee ku yaal gudaha baasaboorka oo la helo furaha. Furahani wuxuu u oggolaanayaa in la helo oo la xaqiijiyo chip -ka iyadoo la adeegsanayo shahaadooyinka dhijitaalka ah ee ku jira chip -ka, hubinta in baasaboorku yahay mid dhab ah oo aan chip -ku wax u dhimin. Marka la hubiyo chip -ka, xogta ku qoran chip -ka oo ka kooban dukumintiga safarka, xogta aqoonsiga, iyo sawirka dhijitaalka ah ee haysta baasaboorka - ayaa la akhriyaa. Waxaa markaa la barbar dhigaa qabashada sawirka selfie ka hor intaan la bilaabin.
Habka qabashada sawirka selfie wuxuu fuliyaa nolol adag iyo jeegaga ka-hortagga kufsiga oo ka dhan ah astaamaha halista wejiga oo badan, kaasoo xoojinaya xaqiijinta aqoonsiga codsadaha. Baaritaannadan amniga ee muhiimka ah waxaa si habsami leh u sameeya app-ka iyada oo aan dhibsanayn codsadaha.
OCR, NFC, sawirka selfie iyo nolol adag, iyo jeegaga ka-hortagga ku-dhex-dhexaadinta ayaa lagu dhex daray app-ka qaab cusub, taas oo aan aaminsanahay inay tahay mid caalami ah marka hore.
Socotada ayaa ku aaminay barnaamijka mid ka mid ah hantidooda ugu qiimaha badan - xogtooda. Sideed wax uga qabatay welwelka asturnaanta horumarkiisa?
Waxaan shaqaalaysiinay Qarsoodi ahaan habka Naqshadaynta inta lagu gudajiray horumarinta appka, laga bilaabo Qiimaynta Saamaynta Qarsoodiga si loo hubiyo in dhammaan tilmaamaha, maaraynta xogta, iyo kaydinta ay u hoggaansamaan shuruudaha gaarka ah ee Dowladda Australia.
Dhammaan xogta shaqsiyeed waxaa lagu kaydiyaa boorsada aaminka ah ee aaladda isticmaalaha. Wax xog ah lama wadaago daneeyayaasha kale, marka laga reebo Arrimaha Gudaha, oo u baahan macluumaadka si loo hirgeliyo codsiyada ETA. Shuruudaha iyo Shuruudaha ayaa si cad loogu qeexay abka dhexdiisa si uu adeegsaduhu u aqbalo ka hor intaan la bilaabin. Tani waxay sharxaysaa sida xogta loogu xafido si ammaan ah, iyo sidoo kale sida loo isticmaalo loona ilaaliyo marka loo gudbiyo Arrimaha Gudaha.
Si loo sii hubiyo asturnaanta shaqsiyeed, codsadayaashu waxay ka tirtiri karaan faahfaahintooda shaqsiyeed iyo codsiyadoodii hore abka wakhti kasta. Intaa waxaa dheer, dhammaan aaladda diiwaangashan ee wakiilka socdaalka oo waliba codsan kara wakiillada codsadayaasha kuma hayn doonaan codsadaha ama xogta dalabka aaladooda kadib marka la soo gudbiyo arjiga.
Barnaamijku wuxuu adeegsadaa kaydinta maxalliga ah ee aaminka ah iyo borotokoollada xaqiijinta adag. Dhammaan isgaarsiinta u dhexeysa aaladda iyo nidaamyada gadaal waa la sir, si loo hubiyo ilaalinta ugu dambeysa iyo xakameynta xogta isticmaale.
Waa maxay jawaab -celinta ilaa hadda?
Bilowgii, habka naqshadeynta waayo -aragnimada ayaa mudnaanta siisay fududeynta adeegsiga codsadaha oo leh khibrad isticmaale aan is -qabad lahayn oo dareen leh labada aaladaha IOS iyo Android. Codsigii ka dhashay ayaa si wanaagsan loo helay, iyada oo adeegsadeyaal badan ay dhammaystirayaan fududeynta adeegsiga iyo fududeynta.
Kormeerka joogtada ah, falanqaynta dabeecadda, iyo jawaab celinta isticmaalaha ayaa qayb ka ah habka xalka. Awoodda in si dhaqso leh loo cusboonaysiiyo abka ayaa awood u siisay kor u qaadista si ay uga caawiso akhrinta noocyada kala duwan ee baasaboorada, bixinta taageero ku saabsan xaaladda socodsiinta, iyo hagaajinta animation ee hagaha tilmaamaha.
Warcelin qiimo leh oo ay bixiyeen codsadayaashu iyagoo adeegsanaya dukaamada app -ka iyo hawsha Xiriirka app -ka ayaa horseeday qaar ka mid ah isbeddellada iyo hagaajinta la hirgaliyay tan iyo bilowgii tijaabada, taas oo sii xoojinaysa abka.
Ka -qaybgalka kooxaha isticmaalayaasha caalamiga ah ee tijaabinta aaladaha kala duwan iyo ururinta macluumaadka waayo -aragnimada isticmaalaha ayaa hubisay in barnaamijku ka shaqeeyo dhammaan agabyada kala duwan iyo kala duwanaanshaha baasaboorka elektiroonigga ah. Tan iyo markii la soo diray app -ka Oktoobar 2020, waxay durba fududeysay u safrida Australia kumanaan qof inta lagu jiro aafada.
ETA-teknolojiyad cusub oo cusub ayaa loo soo bandhigay nadiifinta Socdaalka Australia- eTurboNews | Isbeddellada | Wararka Safarka | Bogga Johnny G. Santo wuxuu leeyahay,
Ogosto 12, 2021 markay tahay 14:06
[…] ETA-teknolojiyad cusub oo cusub ayaa la soo bandhigay si loo nadiifiyo Socdaalka Australia eTurboNews | Isbeddellada | Wararka safarka […]